भर्खरै १७६ यात्रु सवार युक्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त, कसरी घट्यो घटना ? — Imandarmedia.com
भर्खरै १७६ यात्रु सवार युक्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त, कसरी घट्यो घटना ?
एजेन्सी। इरानमा दुर्घटनाग्रस्त युक्रेनी विमान मिसाइल हानेर खसालिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। भिडियोमा मिसाइलले विमानलाई मार हान्दा आगो लागेर खसेको देखिएको छ ।
सीएनएनले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा अध्यारो दृश्य देखिन्छ। जसमा मिसाइलले विमानमा मार हानेको छ। तर, सीएनएनले भिडियोको स्वतन्त्र पुष्टि नभएको बताएको छ।
भिडियो सार्वजनिक भएलगत्तै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पिओले विमान दुर्घटनामा ईरानमाथि आरोप लगाएका छन्। क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रडीले पनि यसबारे धारणा बाहिर ल्याएका छन्।
१७६ यात्रु र चालकदलका सदस्य मारिएको युक्रेनको विमान दुर्घटनाको कारणबारे विभिन्न आशंका उब्जिएको थियो। तेहरानबाट युक्रेनका लागि उडेको जहाज ईरान-अमेरिका बीचको तनावका बखत मिसाइल लागेर झरेको विषय बाहिर आएको थियो।
बुधबार भएको दुर्घटनामा २४ सय मिटर उचाईमा रहँदा विमान सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। यसैगरी, युक्रेनी राष्ट्रति भोलोडिमिर जेलेन्सिकीले फेसबुकमा इरानी अधिकारीको भनाई उदृत गर्दै एउटा इन्जिनमा आगो लागेपछि पाइलटको नियन्त्रणबाहिर विमान गएको लेखेका थिए।
तेस्तै, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले युक्रेनको युद्धमा मध्यस्थता गर्न चीन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ‘सक्रिय’ रुपमा काम गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन्। पश्चिमा मुलुकहरुले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धमाथि चीनले गरेको विरोधलाई उनले पुनः दोहोर्‍याएका छन् ।
जर्मनीका चान्सलर ओलाफ सोल्ज र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याँक्रोसँगको टेलिफोन वार्तामा राष्ट्रपति सीले युक्रेनको अवस्था ‘चिन्ताजनक’ भएको र युरोपेली महाद्धीपमा भएको युद्धबाट चीन चिन्तित रहेको बताएको’ चीनको विदेशमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संलग्न पक्षहरुको आवश्यकताको सन्दर्भमा चीनले फ्रान्स, जर्मनी र युरोपेली युनियनसँग सञ्चार र संयोजन गर्न र अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग सक्रिय ढंगले काम गर्नेछ, मन्त्रालयले भनेको छ ।
संकटको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। विदेशमन्त्रालयका अनुसार शान्ति वार्ता प्रबद्र्धन गर्न दुई देशले बेइजिङसँग सञ्चार र संयोजन सुदृढ गर्न दुबै देश तयार रहेको सोल्ज र म्याँक्रोले बताएका छन्।
तेस्तै, रुस–युक्रेन युद्धः तीन देशका नेतासँग वार्ता गरे पनि युद्ध रोक्न तयार छैनन् पुटिन, यस्तो छ कारण:रुस–युक्रेन युद्ध जारी छ। रुसी सेनाले युक्रेनी सहरहरुमा लगातार मिसाइल प्रहार गरिरहेको छ ।
यसैबीच, युद्ध रोक्न प्रयास भइरहेको छ। अमेरिका र अन्य धेरै देश युक्रेनको साथमा छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले तीन देशका नेताहरुलाई युद्ध अन्त्य गर्न सहयोगको अपिल गरेका छन् ।
जेलेन्स्कीले इजरायलका प्रधानमन्त्री नाफ्ताली बेनेट, टर्कीका राष्ट्रपति एर्डोन र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध रोक्न आग्रह गरे। तीन देशका नेताहरूले पुटिनसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए।
यति हुँदाहुँदै पनि खिया रोक्न सकेको छैन् ।पुटिनले युद्ध रोक्न खोजिरहेका छैनन्। यसका दुईवटा कारण छन्। पहिलो – पुटिनले अमेरिका र युरोपलाई विश्वास गर्दैनन्। पुटिनलाई लाग्छ कि अमेरिका युरोपको बहानामा रुसलाई घेरेर बस्न चाहन्छ ।
युक्रेन अमेरिकाको वर्चस्व रहेको उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन नाटो मा सामेल हुन चाहन्छ। यसले रूसको लागि सुरक्षा खतरा हुन सक्छ। योसँगै युक्रेनले युरोपेली संघ ईयूको सदस्यताको माग गरेको छ।
नाटो र इयुको महत्वपूर्ण सम्झौता भनेको कुनै सदस्य राष्ट्रले आगोमा परेमा सबै देश मिलेर लड्ने हो । अर्थात्, कुनै पनि देश विरुद्धको बाह्य आक्रमणलाई आफ्ना सबै सहयोगीहरू विरुद्धको आक्रमण मानिनेछ।
त्यसैले युक्रेन नाटोको सदस्य बन्ने बित्तिकै रुसलाई चारैतिरबाट नाटो राष्ट्रहरूले घेरेको छ। यसले अमेरिकालाई रुसमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गर्ने स्वतन्त्रता दिनेछ।
दोस्रो कारण स्थिति हो। पुटिन रुसले सोभियत संघमा जुन हैसियत पाएका थिए, त्यही हैसियत चाहन्छन्। पछिल्लो समय रुसको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि सोभियत संघ प्रमुख शक्तिका रूपमा उभिरहेको थियो।
रुस युरोपेली देशहरूमा प्रभुत्व जमाउन चाहन्छ। जसका कारण रुसको युरोपेली मुलुकसँगको सम्बन्ध बिग्रियो। अमेरिका रुसको यो अवस्थाको फाइदा उठाउन चाहन्छ, त्यसैले युक्रेन नाटो र ईयूको सदस्य बन्न चाहन्छ ।
यसबाट अमेरिका सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्न सक्छ। इजरायलको प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अघोषित भेट अमेरिकी प्रशासनको कारण भएको जनाएको छ।
जेलेन्स्कीले इजरायलका प्रधानमन्त्री नाफ्ताली बेनेटलाई पुटिनलाई युद्ध रोक्न आग्रह गरे। त्यसपछि शनिबार मस्को पुगेर बेनेटले पुटिनलाई भेटेका थिए। यसै क्रममा इजरायलले रुस र युक्रेनबीचको युद्धमा मध्यस्थताको प्रस्ताव राखेको थियो। श्रोत बिबिसी।